जनस्वास्थ्यविद्हरूद्वारा सरकार र आममानिसलाई कोरोनाबाट जोगिन सुझाव
सरकारी योजना अस्पष्ट
प्रकासित मिति : २०७७ श्रावण १६, शुक्रबार प्रकासित समय : १४:१८
काठमाडौं । केही दिनयता नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलने जोखिम बढेको र यसै बेला यसबाट गम्भीर बिरामी हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको बताइन्छ।
केही साता अगाडिसम्म ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै सङ्क्रमितमा लक्षण देखिएका थिएनन् तर साउन १४ गतेको आँकडामा २२ जना सघन उपचार कक्ष वा भेन्टिलेटर राखिएको पाइएको छ।
यो बढ्दो जोखिमका माझ के अब सरकारले रोग नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति अहिले कायम गरिराखेको विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ? अनि आम जनताले चाहिँ के गर्नुपर्छ ?
यी प्रश्नको जबाफका लागि हामीले जनस्वास्थ्यविद्हरू डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती तथा डा. अनुप सुवेदीसँग कुराकानी गरेका थियौँ।
उनीहरूले सरकारलाई परीक्षण, सम्पर्क पहिचान, अलग्ग्याउने विधि तथा सीमित लकडाउनका बारे सुझाव दिएका छन् भने आम मानिसलाई पनि सजिलै रोगबाट बच्ने केही सुझाव दिएका छन्।
केही अगाडिसम्म दैनिक ३,००० भन्दा बढी पीसीआर परीक्षण भइरहेकोमा अहिले ६,००० चानचुन पुगेको छ। प्रति दश लाख जनसङ्ख्यामा नेपालले १२,५०० परीक्षण गरिरहेको र त्यो अनुपात यो क्षेत्रमा तुलनात्मक राम्रो भएको सरकारको भनाइ छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. उप्रेती भन्छन्, तर जति परीक्षण बढायो उति सङ्क्रमित धेरै देखिएको हुनाले एक हदसम्म यो बढाउनै पर्छ।
विभिन्न समुदायमा, लक्षण देखिएकाहरूमा तथा जोखिमपूर्ण समूहमा परीक्षण विस्तार हुनुपर्छ। डा. अनुप सुवेदीको सुझाव चाहिँ यस्तो छ, ‘केही दिन यता नाका( नाकामा पनि पीसीआर परीक्षण थालेर राम्रो गरेको छ।’
तर सरकारले परीक्षणको निर्देशिका खुकुलो बनाउनुपर्छ। अहिले तपाइँलाई ज्वरो वा अन्य लक्षण आएपनि यात्रामा कतै ननिस्केको वा कोही सङ्क्रमितसँग भेट नभएको पाइए पीसीआर परीक्षण गर्न पाइँदैन। यस्ता विषय सहज बनाइनुपर्छ।
यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। हामीकहाँ कोही सङ्क्रमित भएको नतिजा नै पाँच(सात दिनपछि आउँछ। त्यसपछि ती सङ्क्रमित कस(कसको सम्पर्कमा रहे भन्ने बारे विस्तृत पहिचान गर्नुपर्छ, डा सुवेदीले भने।
यो कठिन काम भएपनि गर्नैपर्छ। लाग्छ यहाँ केवल फोन गरेर परिवारलाई सतर्क गराइएको हुनसक्छ। यसको दायरा बढाउनैपर्छ।
सङ्क्रमित व्यक्ति लक्षणविहीन छ भने उसले घरमात्र होइन, बाहिर चिया पसल वा अन्यत्रको भेटघाटबारे पनि विस्तृत विवरण लिनुपर्ने उनले बताए।
डा. उप्रेतीको विचारमा चाहिँ सम्पर्क पहिचानको कार्य भनेको जतिसक्दो चाँडो गर्नु जरुरी हुन्छ। यसबारे अहिले के भइरहेको छ वा सरकारले कसरी गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट सूचना प्राप्त नभएको उनले बताए। बीबीसीबाट